Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Khasaare Keenay oo Kadhacay Gobolka Axmaarada.
Dagaal Khasaare Keenay oo Kadhacay Gobolka Axmaarada.
Posted by Dulmane	/ April 28, 2018
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Gonder ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya dagaal culus oo ciidamada wayaanaha iyo kuwa Jabhada Ginbot 7 kudhex maray duleedka magaalada Gonder.
Warkan oo aan kahelay ilo wareedyo magaalada Gonder kusugan ayaa sheegaya in dagaalku uu dhacay galabnimadii maalintii shalay ee Jumcada ahayd, waxayna xogtu sheegaysaa in dagaalkan uu keenay khasaare balaadhan oo dhinacyadii dagaalamayay ah.
Afhayeen u hadlay jabhada Ginbot 7 ayaa sheegay in ciidanka wayaanaha ay gaadhsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh, wuxuuna afhayeenku intaas kudaray in goobtii dagaalku uu kadhacay ay dagaal yahanada Ginbot 7 lawareegeen.
Dagaalka ayaa lasheegayaa in uu kadhacay woqooyiga Gobolka Gonder, halkaas oo ciidamada Ginbot 7 ay jidka ugaleen kolanyo baabuur ah oo ciidanka wayaanuhu ay wateen, waxaana lasheegayaa in rasaas culus lahuwiyay.
Ciidanka Jabhada Ginbot 7 ayaa sare uqaaday dagaalada ay kuhayaan ciidamada wayaanaha gaar ahaan kuwa Commond Post ga looyaqaano, waxaana lasheegayaa in ay ciidanka wayaanuhu yareeyeen isusocodkii Gobolada dhulka Axmaarada.
Dhinaca kale dadka shacabka ah ee udhashay qoomiyada Axmaarada ayaa sare uqaaday taageerada ay u hayaan ciidamada Jabhada Ginbot 7 ee udagaalanta xornimo gaadhsiinta dadka Xabashida ah.